အစားအစာကြောင့် ၀မ်းမသွားအောင် ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲ – Shwehealth.com
25. ဩဂုတျ 2016 25. ဩဂုတျ 2016
ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ် အစာစားကြသည်။ အစားအစာဆိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိကလိုအပ် ချက်သုံးခုဖြစ်ကြသည့် အစား၊ အဝတ်နှင့် အမိုးအကာတွင် တစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘဝတွင် အဓိကပါဝင်နေခြင်းကြောင့် ယင်း၏ သန့်ရှင်းမှုသည်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်အရေးကြီးသည်။ အစားအစာ၏ သန့်ရှင်းရေးသာမက အစားအစာကို ကိုင်တွယ်သူ၏ သန့်ရှင်းမှု၊ သိမ်းဆည်းမှု၊ အသုံးပြုသော ပစ္စည်းများ၏ သန့်ရှင်းမှုနှင့် အစားအစာကို တည်ခင်းသော နည်းလမ်းများသည်လည်း အရေးကြီးသည်။ ဤနေရာတွင် အစားအစာမှတဆင့် ဝမ်းပျက်ခြင်းမဖြစ်စေရန်အတွက် လမ်းညွှန်ချက်အချို့အား ဖော်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။
အစားအစာနှင့် ပတ်သက်သော ဝမ်းသွားခြင်းများတွင် ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်ခြင်း၊ ဗိုင်း ရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်ခြင်းနှင့် ခရီးသွားဝမ်းရောဂါစသည်ဖြင့် သုံးမျိုးပါဝင်ပါသည်။
ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်ခြင်းများတွင် အချို့သော ဆိုးကျိုးပေးနိုင်သည့် ဘက်တီးရီးယား များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အစာချေစနစ်အား ကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်နိုင်စေရန် ပြုလုပ်သည်။ ယင်းတို့ အား အသားစိမ်းများ၊ ဥများ၊ အခွံပါသည့် ပင်လယ်စာ၊ ကျိုချက်မထားသောနို့၊ မသန့်ရှင်းသော အိုး ခွက်များနှင့် မသန့်ရှင်းသော အစားအစာကိုင်တွယ်သူ၏ လက်များတွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။
ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်ခြင်းများတွင် ဝမ်းပျက်ခြင်းကိုဖြစ်စေသော ဗိုင်းရပ်စ်များသည် အလွန်ကူး စက်မြန်ပြီး သန့်ရှင်းမှုမရှိသော လက်များမှတဆင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အစာအိမ်အတွင်းသို့ အလွယ်တကူ ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။
ခရီးသွားဝမ်းရောဂါတွင်မူ ယင်းသည် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တခုခုသို့ ခရီးသွားနေသော သူများ တွင် ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ နိုင်ငံအပေါ်မူတည်၍ ခရီးသွားများ၏ ၃ဝ% မှ ၇ဝ% အတွင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ယင်းသည် ဒေသခံပတ်ဝန်းကျင်၊ အစားအစာနှင့် ရေတို့ဖြင့် နေသားမကျမှုကြောင့် ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပြီး အများအားဖြင့် ၁၂ နာရီအတွင်း ပျောက်ကင်းလေ့ရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အစားအစာများအကြောင်းကို သိအောင်ပြုလုပ်ခြင်း
နို့နှင့်နို့ထွက်ပစ္စည်းများသည် အခြားသော အစားအစာများထက်ပို၍ ဝမ်းပျက်ခြင်းကို ဖြစ်စေ နိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူအတော်များများသည် ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်နှင့် ဖျော်ရည်များအား သောက်သုံးခြင်းကို ပို၍နှစ်သက်သောကြောင့် နို့သောက်ခြင်းသည် အလွန်လူကြိုက်များသော ကိစ္စ တစ်ခု မဟုတ်ပေ။ သို့ရာတွင် မြန်မာ့နာမည်ကျော် မုန့်ဟင်းခါးတွင် အသုံးပြုသော မုန့်ဖတ်သည် လည်း ရောဂါဖြစ်စေနိုင်သော အချက်များအနက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ လမ်းဘေးစာများအား စားသောက် ရာတွင် သတိပြု၍ စားသောက်သင့်သည်။ သစ်သီးများတွင်လည်း ယင်းတို့၏ အခွံများပေါ်တွင် ဝမ်း ပျက်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သော ပိုးမွှားများ ရှိနိုင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လမ်းဘေးစာရောင်းချသူ အများစုသည် သန့်ရှင်းမှုအကြောင်း ဗဟုသုတ နည်းပါးကြသည်။ လမ်းဘေးစာအများစုအား ဖုန်များနှင့် ပိုးမွှားများ များစွာရှိနိုင်သော လမ်းများဘေး တွင် အဖုံးအကာမပါဘဲ အလွယ်တကူ ရောင်းချနေကြသည်ကို တွေ့နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ သားများအတွက်တော့ ယင်းသည် အသားကျနေသော မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ယင်းအတွက် ကိုယ် ခန္ဓာတွင်လည်း ခုခံအား ရရှိပြီး ဖြစ်နေနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာလည်သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါက ယင်းအား သတိပြုသင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယင်းသည် သင့်အား ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်သော ဝမ်းပျက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အစာချေစနစ်အတွင်း၌ အကျိုးပြုသော ပိုးမွှားများလည်း ရှိကြသည်။ ယင်းတို့ သည် ကျန်းမာသော အစာချေလမ်းကြောင်းကို ဖြစ်စေပြီး အစာချေမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ကောင်းစွာ ဖြစ်စေ နိုင်သည်။ အကယ်၍ ယင်းပိုးမွှားပမာဏသည် ပုံမှန်ထက် နည်းနေပါက သင့်တွင် ဝမ်းပျက်ခြင်းဖြစ်နိုင် ချေပိုများသည်။ ကံကောင်းစွာဖြင့် ယင်းအကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားများပါဝင်သော အစားအစာများ ရှိ သည်။ လူသိများသော အရာတစ်ခုမှာ ဒိန်ချဉ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဒိန်ချဉ်တွင် အကျိုးပြုပိုးမွှားများ များပြား စွာပါဝင်ပြီး ယင်းအား မကြာခဏသောက်သုံးခြင်းသည် သင့်၏ အစာချေစနစ်အား ပို၍ ကျန်းမာစေနိုင် ပါသည်။
ဝမ်းပျက်ခြင်းသည် အစားအစာ၏ မသန့်ရှင်းမှု၊ အစားအစာပြုလုပ်ခြင်း၊ အစားအစာကိုင် တွယ်ခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်း စသည်တို့တွင် မသန့်ရှင်းမှုများကြောင့်လည်း ဖြစ်ပွားနိုင်သောကြောင့် အစားအစာမှတဆင့် ဝမ်းပျက်ခြင်းမဖြစ်စေရန်အတွက် သန့်ရှင်းမှုသည် မရှိမဖြစ်သော အရာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
အစားအစာပြင်ဆင်ခြင်းများအား သန့်ရှင်းစွာ ပြုလုပ်သင့်ပြီး လတ်ဆတ်သော ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ မလတ်ဆတ်သော သို့မဟုတ် အမှည့်လွန်နေသော အစားအစာသည် ဝမ်းပျက် ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ အခြေခံ တကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုသည်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ အစားအ စာမစားမီတွင် လက်နှစ်ဖက်စလုံးအား ဆပ်ပြာဖြင့် သေချာစွာ ဆေးကြောသင့်ပါသည်။ ပြင်ဆင်ထား သော အစားအစာများကိုလည်း ယင်နားခြင်းမရှိစေရန် ဖုံးအုပ်ထားသင့်သည်။ အကြောင်းမှာ ယင် ကောင်များသည် ဝမ်းပျက်ခြင်းကို ဖြစ်စေသော ပိုးမွှားများအား အဓိက သယ်ဆောင်သူများ ဖြစ်ခြင်း ကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ သစ်သီးများအား မစားမီတွင် အခွံခွာသင့်ပါသည်။ အသားများ၊ ငါးများနှင့် ဥများ အားလည်း မစားသုံးမီတွင် သေချာစွာ ချက်ပြုတ်သင့်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ယင်းတို့တွင် လည်း ရောဂါပိုးမွှားများစွာ ပါဝင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ နို့ထွက်ပစ္စည်းများအတွက်ဆိုပါက ယင်းတို့၏ လတ်ဆတ်မှုသည် အဓိက ဦးစားပေးဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည် လမ်းဘေးစာများနှင့် အသားကျမှုမရှိပါက ယင်းတို့အား ရှောင်ကျဉ်ပါ။ သို့မဟုတ် သန့်ရှင်းမှုရှိသော လမ်းဘေးစာရောင်းချသူများအား ရွေးချယ်ပါ။ စားကျွင်းစားကျန်များ အား အခန်းအပူချိန်တွင် ကြာမြင့်စွာထားခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။ ယင်းတို့အား လတ်ဆတ်မှုကို ထိန်း သိမ်းနိုင်ရန်အတွက် ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် အမြန်ဆုံး သိမ်းဆည်းသင့်ပါသည်။ အစားအစာထည့်သည့် ပစ္စည်းများ၊ အိုးခွက်များ၊ ဖန်ခွက်များနှင့် အခြား ပစ္စည်းများကိုလည်း သေချာစွာ ဆေးကြောထားသင့် ပါသည်။ သောက်သုံးရန် ပြုပြင်ထားခြင်း မရှိသော ရေစိမ်းအား မသောက်သုံးပါနှင့်။ အကယ်၍ ရေသန့်အား မရနိုင်ပါက ကျိုချက်ထားသော ရေကိုသာ သောက်သုံးရန်အတွက် အသုံးပြုသင့်ပါ သည်။
အသုံးဝင်သော link များ (1) (2)